Sidee Suuq-geynta Teknolojiyadda Deepfake u saameyn ugu yeelan doonaa? | Martech Zone
Haddii aadan wali isku dayin, laga yaabee barnaamijka mobilada ee aan ugu xiisaha badnaa sanadkan Dib u eegis. Codsiga moobiilka ayaa kuu oggolaanaya inaad wejigaaga qaadatid oo aad beddesho wejiga qof kasta oo sawir kale ama fiidiyow kale ku jira keydkooda xogta.
Maxaa loogu yeeraa Deepfake?
Deepfake waa iskudhaf shuruudaha Barashada Deep iyo Fake. Deepfakes waxay ka faa'iideysataa barashada mashiinka iyo sirdoonka macmalka ah si ay u maareyso ama u soo saarto waxyaabaha muuqaalka iyo maqalka leh oo leh awood sare oo lagu khiyaaneeyo.
App -ka Dusha
The Dib u eegis Codsiga moobiilku waa sahlan yahay in la isticmaalo natiijooyinkuna waxay noqon karaan kuwo qosol badan. Natiijooyinkeyga halkan ayaan ku wadaagi doonaa. Xusuus-qor… ma ahan kuwa khiyaano badan, kaliya waa wax laga xishoodo, laga naxo, oo qosol badan.
Fariin ay wadaagaan Douglas Karr (@khadar_mahad)
Kala soo bax barnaamijka Reface-ka
Miyey Deepfakes ka cabsi badanyihiin kuwa qosolka badan?
Nasiib darrose, waxaan ku noolnahay adduun ay xog-baahintu ku badan tahay. Natiijo ahaan, tiknoolajiyada qoto-dheer waa mid aan had iyo jeer looga faa'iideysan karin wax aan waxba galabsan sida aniga oo iga dhigaya qoob-ka-ciyaar ama xiddig filim u ah… waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu faafiyo xog-faafinta.
Qiyaas, tusaale ahaan, sawirro, maqal, ama muuqaal fiidiyoow ah oo adeegsanaya teknolojiyad qoto dheer oo lagu dhisayo siyaasi. Xitaa haddii loo aqoonsado mid qoto-dheer, natiijada waxay ku socon kartaa xawaaraha warbaahinta bulshada si loogu maareeyo ra'yiga cod-bixiyeyaasha. Nasiib darrose, boqolkiiba tiro aad u badan oo codbixiyayaashu - in kasta oo ay aad u yaryihiin - way rumaysan karaan.
Waa kuwan fiidiyow weyn oo ka socda CNBC mawduuca:
Sida laga yaabo inaad ogaato, maamulayaasha iyo tikniyoolajiyadda ogaanshaha ayaa caan ku noqday isku dayga lagula dagaallamayo tiknoolajiyada qoto-dheer. Shaki kuma jiro inay xiiso yeelanayso…
Sidee Deepfakes loogu isticmaali karaa Suuqgeynta?
The farsamada si loo soo saaro warbaahin qoto dheer waa ilo furan oo laga heli karo webka oo dhan. Intii aan ku aragnay filim casri ah (muuqaalkii Carrie Fisher ee 1970-meeyadii waxaa loo adeegsaday qashin-qubka Rogue One), kuma aanan arag iyaga oo suuq geynaya… laakiin waan arki doonnaa.
Aaminaaddu waa mid muhiim u ah xiriir kasta oo ka dhexeeya macaamiisha iyo sumadda. Marka laga reebo ciqaabta sharciga, ganacsi kasta oo eegaya adeegsiga tikniyoolajiyad qoto dheer oo ku saabsan iibkooda iyo dadaallada suuqgeyntu waa inay si tartiib tartiib ah u socdaan step laakiin waxaan arkaa fursado:
Warbaahinta shaqsiyeed - noocyadu waxay u abuuri karaan warbaahin ujeedada kaliya ee ah inay macaamiishooda is geliyaan. Qiyaas naqshadeeyayaasha moodada, tusaale ahaan, oo qofka u suurta gelinaya inuu wejigiisa iyo u ekaanshaha jidhkiisa galiyo fiidiyaha dhabaha. Waxay arki kari waayeen sida moodadu muuqaal ahaan ugu muuqato (dhaqdhaqaaq) iyagoon waligood isku dayin dharka.
Warbaahinta kala qaybsan - duubista iyo tafatirka fiidiyowyadu waxay qaas ahaan qaali noqon karaan oo magacyadu waxay si aad iyo aad ah ugu fiirsanayaan matalaadda tirada dadka iyo dhaqamada la soo sawiray. Mustaqbalka dhow, summad ayaa duubi karta hal fiidiyow - laakiin waxay u adeegsataa tikniyoolajiyad qoto dheer si ay u kala soocdo farriinta si ay u metelaan dad iyo dhaqan kala duwan.
Isku darka Fiidiyowga - magacyadu waxay lahaan karaan wakiilladooda iibka ama hoggaamiyeyaashu inay ku jilaan fiidiyowyo qoto-dheer laakiin shaqsi ahaan si toos ah loola xiriiro rajada ama macmiilka. Tiknoolajiyadda noocan ah horay ayaa loogu heli karaa madal Synthesia. In kasta oo aan aaminsanahay in magacyadu ay soo bandhigayaan qoto-dheeriga, tani waa hab indho-qabad leh oo si toos ah loola hadlo qof kasta shaqsiyan.
Warbaahinta la tarjumay - magacyadu waxay u adeegsan karaan saamileyaasha luuqadaha oo dhan. Waa tan tusaale cajiib ah oo David Beckham ah - oo muuqaalkiisa uu soo jiidan doono dareenka, laakiin farriinta si habboon ayaa loo tarjumay. Xaaladdan oo kale, waxay u isticmaalaan codad kale iyo tiknoolajiyad qoto dheer dhaq-dhaqaaqa afka… laakiin sidoo kale waxay isticmaali lahaayeen qoto-dheer si ay ugu beddelaan codka.
Dhammaan tusaalooyinkaas oo dhan, soo-qaadashada qoto-dheer uma jirto inay wax khiyaaneeyaan laakiin waa inay hagaajiyaan xiriirka. Waa xariiq khafiif ah… ganacsiyada waa inay taxaddar ku yeeshaan!
Aan ku dhammeyno qoraal wanaagsan note
Shaacinta: Waxaan u isticmaalayaa xiriiriyaha xiriirka aan u leeyahay App dib u eegis. Waxaan aad ugu boorinaayaa nooca la bixiyay oo bixiya tan tan oo warbaahin dheeri ah oo lagu qaldo.
Tags: affiliatewaxbarashada qoto dheerqoto dheertiknoolajiyad qoto dheercusboonaysiin